डाउनलोड गर्नुहोस् eFootball 2022 को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (50 GB)
डाउनलोड गर्नुहोस् eFootball 2022,
eFootball 2022 (PES 2022) Windows 10 पीसी, Xbox श्रृंखला X/S, Xbox एक, प्लेस्टेशन 4/5, आईओएस र एन्ड्रोइड उपकरणहरु मा एक मुक्त गर्न को लागी फुटबल खेल हो। कोनामी को नि: शुल्क फुटबल खेल PES कि क्रस प्लेटफर्म गेमप्ले को समर्थन लाई बदल्दै, eFootball अब फुटबल प्रशंसकहरु को लागी भाप को माध्यम बाट टर्की भाषा को समर्थन संग उपलब्ध छ।
EFootball २०२२ डाउनलोड गर्नुहोस्
eFootball विश्व eFootball २०२२ को मुटु हो। यहाँ प्रामाणिक टीमहरु संग खेल्दै तपाइँको मनपर्ने वास्तविक जीवन प्रतिद्वन्द्वीहरु पुन: बनाउनुहोस्। अर्को तर्फ, स्थानान्तरण र तपाइँ चाहानु भएको खेलाडीहरु को विकास गरेर तपाइँको सपना टीम बनाउनुहोस्। सबैभन्दा ठूलो टूर्नामेंट र सबैभन्दा रोमाञ्चक घटनाहरु मा विश्व भर बाट विपक्षीहरु को बिरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् जब तपाइँ तयार हुनुहुन्छ।
एफसी बार्सिलोना, म्यानचेस्टर युनाइटेड, युभेन्टस र एफसी बायर्न Mchennchen जस्तै अचम्मको टीमहरु को नियन्त्रण लिनुहोस्। बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख, युभेन्टस, म्यानचेस्टर युनाइटेड, आर्सेनल, कोरिन्थियन्स, फ्लेमेng्गो, साओ पाउलो, नदी प्लेट संग मानव वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विरोधीहरु को बिरूद्ध अफलाइन खेल खेल्नुहोस्। अनलाइन PvP मिलान खेल्नुहोस् र पुरस्कार कमाउन मिशन उद्देश्य पूरा गर्नुहोस्।
तपाइँको सपना टीम बनाउनुहोस् र संसार भर बाट खेलाडीहरुको सामना गर्नुहोस्। भर्ती खेलाडीहरु र प्रबन्धकहरु कि तपाइँको छनौट संरचनाहरु र रणनीति संग मेल खान्छ र उनीहरुको पूर्ण क्षमता को लागी विकास। स्थानान्तरण लक्षित गर्नुहोस् तपाइँ eFootball २०२२ मा सबैभन्दा धेरै चाहानुहुन्छ र खेलाडीहरु को रूप मा तपाइँ फिट देख्नुहुन्छ विकास गर्नुहोस्।
प्रत्येक लक्ष्य यसको आफ्नै इनाम छ, तपाइँ सक्दो धेरै पूरा गरेर तपाइँको सबै भन्दा राम्रो गर्नुहोस्। यदि तपाइँ अझ राम्रो पुरस्कार चाहानुहुन्छ, eFootball सिक्का प्रयोग गरी प्रीमियम मिशन पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। eFootball सिक्का एक इन-खेल मुद्रा हो कि तपाइँ खेलाडीहरु संग अनुबंध मा हस्ताक्षर गर्न को लागी र अन्य वस्तुहरु को बीच, लाभदायक मिलान पास प्राप्त गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जीपी एक इन-गेम मुद्रा हो कि तपाइँ खेलाडीहरु र प्रबन्धकहरु लाई हस्ताक्षर गर्न को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। eFootball अंक मा खेल अंक हो कि तपाइँ खेलाडी हस्ताक्षर र आइटम को लागी रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ।
eFootball २०२२ भाप
त्यहाँ ईफुटबल २०२२ मा ४ प्रकारका खेलाडीहरु छन्: मानक, प्रचलन, फीचर्ड र पौराणिक।
मानक - खेलाडीहरु वर्तमान सिजन मा आफ्नो प्रदर्शन को आधार मा चयन गरीन्छ। (त्यहाँ खेलाडी विकास छ)
ट्रेन्डि - - खेलाडीहरु एक विशेष म्याच वा हप्ता जसमा उनीहरु सीजन भर मा प्रभावशाली प्रदर्शन गरीएको छ द्वारा निर्धारित गरिन्छ। (कुनै खेलाडी विकास छैन)
फीचर्ड - वर्तमान सिजन मा आफ्नो प्रदर्शन को आधार मा छनौट खेलाडीहरु (खेलाडी विकास उपलब्ध छ)
पौराणिक - एक विशिष्ट मौसम मा आधारित जब खेलाडीहरु उत्कृष्ट प्रदर्शन। यो पनि महान क्यारियर संग सेवानिवृत्त खेलाडीहरु सामेल छन्। (त्यहाँ खेलाडी विकास छ)
त्यहाँ eFootball 2022 मा उपलब्ध म्याचहरु को5प्रकार छन्:
भ्रमण घटना - भ्रमण ढाँचा मा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विरोधीहरु विरुद्ध खेल्नुहोस्, घटना अंक स collect्कलन र पुरस्कार कमाउन।
चुनौती घटना - मानव विरोधीहरु को बिरुद्ध अनलाइन खेल्नुहोस्, पुरस्कार कमाउन को लागी पूरा मिशन उद्देश्यहरु लाई पूरा गर्नुहोस्।
अनलाइन द्रुत मिलान - एक मानव प्रतिद्वन्द्वी को बिरुद्ध एक आकस्मिक अनलाइन खेल खेल्नुहोस्।
अनलाइन मिलान लबी-एक अनलाइन मिलान कोठा खोल्नुहोस् र एक १ मा १ खेल को लागी एक प्रतिद्वन्द्वी आमन्त्रित गर्नुहोस्।
eFootball क्रिएटिव लीग - eFootball संसार मा सबै भन्दा राम्रो को बिरुद्ध खेल्न रचनात्मक टीमहरु को उपयोग गर्नुहोस्। समान रूपमा मिलान विरोधीहरु को बिरुद्ध PvP खेल खेल्नुहोस् र रैंकिंग मा सार्न अंक स collect्कलन। एक राउन्ड (१० म्याच) को दौरान तपाइँको प्रदर्शन र रैंक को आधारमा पुरस्कार कमाउनुहोस्।
eFootball 2022 प्रणाली आवश्यकताहरु
हार्डवेयर पीसी मा eFootball 2022 खेल्न को लागी आवश्यक छ: (eFootball 2022 पीसी न्यूनतम प्रणाली आवश्यकताहरु खेल चलाउन को लागी पर्याप्त छ, र बिल्कुल नवीनतम सुविधाहरु अनुभव गर्न को लागी, तपाइँको कम्प्यूटर को eFootball 2022 सिफारिश प्रणाली आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्नु पर्छ।)
न्यूनतम सिस्टम आवश्यकताहरु
प्रोसेसर: इंटेल कोर i5-2300 / AMD FX-4350
भिडियो कार्ड: Nvidia GeForce GTX 660 Ti / AMD Radeon HD 7790
नेटवर्क: ब्रॉडब्यान्ड इन्टरनेट जडान
भण्डारण: ५० जीबी उपलब्ध ठाउँ
प्रोसेसर: इंटेल कोर i5-7600 / AMD Ryzen51600
भिडियो कार्ड: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590
eFootball २०२२ डेमो
EFootball २०२२ डेमो कहिले जारी हुनेछ? के eFootball २०२२ डेमो रिलीज हुनेछ? EFootball २०२२ डेमो उत्सुकता संग पीसी को लागी प्रतीक्षा गरिएको थियो, तर Konami नयाँ PES प्रतिस्थापन फुटबल खेल को लागी मुक्त गर्न को लागी निर्णय गरीएको छ। फीफा २२ को विपरीत, ईफुटबल २०२२, यसको अझै पनी अविस्मरणीय नाम PES २०२२ को साथमा, फुटबल प्रशंसकहरुलाई नि: शुल्क प्रस्ताव गरिएको थियो। eFootball २०२२ विन्डोज कम्प्यूटर मा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
EFootball २०२२ मोबाइल रिलीज कहिले हुनेछ?
eFootball 2022 मोबाइल को लागी eFootball PES 2021 को लागी एक अपडेट को रूप मा उपलब्ध हुनेछ, फुटबल गेमप्ले को एक नयाँ पुस्ता लाई गेम ईन्जिन बाट गेमप्ले अनुभव सम्म हरेक पक्ष मा सुधार संग ल्याउने। कोनामीको कथनले भन्यो: हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि हाम्रा प्रशंसकहरु जो मोबाइल मा ईफुटबल PES 2021 को आनन्द लिन्छन् eFootball 2022 को साथ महान फुटबल अनुभव को आनन्द जारी रहनेछ। त्यो दिमागमा संग, हामी एक नयाँ स्थापना को सट्टा एक अपडेट को रूप मा PES २०२२ मोबाइल प्रदान गर्दैछौं।
तपाइँ eFootball PES 2021 बाट तपाइँको इन-गेम सम्पत्तिहरु मध्ये केहि खरीद गरेर तपाइँको eFootball २०२२ अनुभव शुरू गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। खेल को अपडेट संग, न्यूनतम प्रणाली आवश्यकताहरु परिवर्तन हुनेछ र केहि उपकरणहरु लाई समर्थित छैन। असमर्थित उपकरणहरु को लागी, यो eFootball २०२२ को अपडेट पछि खेल खेल्न सम्भव हुनेछैन। प्रदर्शन समर्थित उपकरणहरु को बीच फरक हुनेछ। यदि तपाइँ तपाइँको यन्त्र लाई ताजा गर्न को लागी ईरादा गर्नुहुन्छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको डाटा लाई eFootball PES 2021 मा जोड्नुहोस्। यो तपाइँ eFootball २०२२ मा तपाइँको सम्पत्ति सार्न को लागी अनुमति दिनेछ।
म्याच प्रकार: त्यहाँ चार म्याच प्रकार छन्: भ्रमण घटना, चुनौती घटना, अनलाइन छिटो मिलान र अनलाइन मिलान लबी। खेलाडीहरु जसको अनुबन्ध समाप्त भएको छैन यी म्याच प्रकार को कुनै पनि खेल्न सक्छन्। केहि खेलहरु केहि शर्तहरु लाई पूरा गर्ने खेलाडीहरु संग सहभागिता लाई सीमित गर्न सक्छन्। यदि एक खेलाडी को अनुबंध समाप्त भएको छ, उनीहरु अनलाइन छिटो म्याच र अनलाइन मिलान लबी मा सामेल हुन सक्छन्।
खेलाडी प्रकार: त्यहाँ चार प्रकारका खेलाडीहरु छन्: मानक, प्रचलन, फीचर्ड, र पौराणिक। तपाइँको खेलाडी अनुबंध शैली द्वारा फरक हुन्छ। जस्तै; जीपी मात्र मानक खेलाडीहरु हस्ताक्षर गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। EFootball २०२२ मा, तपाइँ केहि खेलाडीहरु तपाइँको टीम संग अनुबंध मा हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुन्छ।
eFootball २०२२ मोबाइल एन्ड्रोइड र आईओएस उपकरणहरु को लागी जारी गरिनेछ। खेलाडीहरु एक अर्का बिरुद्ध खेल खेल्न सक्षम हुनेछन्। मोबाइल र कन्सोल बीच क्रस प्ले एक भविष्य को अपडेट मा जोडिनेछ। EFootball २०२२ मोबाइल कहिले जारी हुनेछ? प्रश्न सोध्न को लागी, eFootball २०२२ मोबाइल रिलीज मिति घोषणा अक्टोबर मा गरिनेछ।
eFootball 2022 चश्मा
फाईल आकार: 50 GB
पछिल्लो अद्यावधिक: 01-01-2022
डाउनलोड गर्नुहोस्: 4,489